Kulankii Golaha Shacabka oo baaqday (AKHRISO) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Kulankii Golaha Shacabka oo baaqday (AKHRISO)
Tuuryare 1 April 2019
Guddoonka Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa xaqiijiyay in uu baaqday Kulankii 1-aad Kalfadhiga 5-aad ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Qoraal goordhaweyd kasoo baxay Guddoonka ayaa lagu sheegay in Kulanka uu u baaqday Kooram La’aan,islamarkaana aan la helin tiradii xildhibaanadda kulanka ku furmi lahaa.
Ajendaha kulanka maanta ayaa ahaa sida uu sheegay Guddoonka labo qodob oo kala ah hadal jeedinta guddoomiyaha golaha shacabka Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Shiikh C/raxmaan, warbixinta guddiga dib u eegista dastuurka.
Dhanka kale sida ay inoo xaqiijiyeen xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya, kulanka maanta ayaa u baaqday muran ka taagan ajendaha kulanka uu noqonayo.
Xildhibaanadda mucaaradsan Dowladda ayaa doonaya in kulanka lagu furo ajende ku saabsan xaaladda amaanka dalka gaar ahaan amniga Magaaladda Muqdisho oo qaraxyo ay ka dhaceyn maalmihii dambe.
Kulankii koowaad oo Sabtidii dhici lahaa ayaa u baaqay sidoo kale muran soo kala dhexgalay Xildhibaanadda Baarlamaanka oo doonayay in ajendaha kulanka wax laga badalo.
Wasiir Cawad oo khudbad ka jeediyay Shirka Madaxda Carabta
Somalia: Al Shabaab assassin arrested in Mogadishu